Antony 12 Maninona ny bandy tsy mba mandefa SMS aloha, fa mamaly foana - Fifandraisana
Antony 12 Maninona ny bandy tsy mba mandefa SMS aloha, fa mamaly foana
Efa teo daholo isika teo aloha - tena mandeha tsara ny zava-misy amin'ilay bandy hitantsika, miresaka tsara izahay, ary mijanona mandefa hafatra mandritra ny alina.
Saingy, tsy ho ela ianao dia mahatsikaritra fa ianao no manomboka ny resaka rehetra. Hafatrao foana aloha ianao ary, na dia mamaly anao foana aza izy dia tsy mba manomboka zavatra akory!
Misafotofoto sy mahasosotra, sa tsy izany?
Soa ihany fa efa nalaminay ny dikan'izany mba tsy hanahy intsony ianao…
1. Milalao lalao izy.
Tsy milaza izahay fa mpilalao daholo ny tovolahy, fa io no antony mahazatra indrindra ny tsy fandefasan-SMS an-dry zalahy aloha.
Mety ho izy milalao kilalao saina miaraka aminao ary mankafy fotsiny ny fisondrotan'ny ego anao mampiseho fa liana aminy ianao.
Manelingelina raha manao an'ity ny bandy ary mety tena mahasadaikatra izany, saingy ilaina ny mitadidy fa milalao lalao fotsiny izy aminao.
Miezaha mijanona tsy ho voalohany mandefa SMS matetika ary - raha miahy anao izy - dia hiverina tsy ho ela izy, manahy fa nifindra ianao!
Ary raha tsy manao izany izy, dia… ho fantatrao ny zavatra tsapany sy ny toerana ijoroanao.
2. Tena saro-kenatra izy.
Misy stereotype toy izany ny lehilahy macho tsy manana fihetseham-po ary samy ego fotsiny.
Saingy, mila dinihinao ny zava-misy fa mety saro-kenatra fotsiny izy!
Mety tsy nifankahita firy izy taloha, na mety ho nahatsiaro tena ary tsy azony antoka ny fomba hanombohana resaka tsara sy hahatonga anao ho liana aminy.
ny fomba hampaherezana olona iray izay nisaraka
Avelany ianao hitarika sy hametraka ny hafainganana, ary angamba mieritreritra fa ity no safidy azo antoka indrindra.
3. Nahazo ny sakantsakana izy.
Tahaka ny vehivavy sasany, ity lehilahy ity dia mety naratra taloha ary matahotra ny holavina ankehitriny.
Adinontsika indraindray fa ny lehilahy dia toy ny vehivavy ihany raha io karazana zavatra io.
Sarotra ny mampiaraka, ary maro be amintsika no manahy raha ho tianao amin'ny fiainana tena izy fa tsy amin'ny Tinder fotsiny. Mihorohoro izahay fa ny olona tena tiantsika dia mety tsy tena tia antsika loatra ary handà antsika.
Noho izany, napetrakay ireo mpiambina antsika ary somary nisintaka kely isika. Fepetra fiarovan-tena izany ary, na dia tsy mahasalama loatra aza, dia dia mahazatra be.
Mety tsy mandefa sms aloha izy satria manahy ny hametraka ny tenany any, fa hamaly anao foana satria liana marina izy!
4. Tsy te ho toa sahirana izy.
Raha oharina amin'ilay teboka etsy ambony - mety ho nokianin'ny taloha izy noho izy tena mila sa misisika be .
Raha vao voampanga amin'izany ianao dia azo inoana fa mihemotra be dia be ianao ary manandrana milalao azy milay.
Raha mazoto miresaka ianao raha vao manomboka ny resaka, fa tsy mandefa SMS aminao mihitsy aloha izy dia mety tiany ianao, saingy miezaka ny hotehirizina izy ary hitazona kely!
ahoana no tsy saro-piaro amin'ny fifandraisana
5. Mampitahotra anao izy.
Raha tsy mandefa hafatra aloha izy, fa mamaly foana, dia mety hahatsiaro ho natahotra anao izy.
Rehefa dinihina tokoa, dia manomboka resaka amin'ny hafatra mahafinaritra sy mahaliana toy izany ianao! Mampatahotra izany ny lehilahy sasany zatra ‘mifehy’ rehefa mampiaraka.
Raha mbola tsy nisy tovovavy be herim-po handefasana sms na hafatra azy ireo aloha dia mety tsy azony antoka ny fomba hitantanana azy.
Azo inoana fa somary mitebiteby amin'ny fomba filalaovana zavatra izy ireo ary te-hahazo antoka fa manaitra anao izy ireo. Avelany ianao hitarika, fa azo antoka fa mbola liana aminao izy ireo.
6. Tsy dia mahaliana ny resakao.
Amin'ny fotoana iray, na mandefa SMS alohan'ny mampiaraka voalohany na mandefa hafatra amin'ny sipanao mandritra ny 3 taona dia mety hankaleo ny raharaha.
Ara-dalàna izany! Tsy afaka manao zavatra manaitaitra sy mendrika an-tsoratra isika rehetra ny fotoana, ka ny resaka dia mety hivadika ho momba ny torimaso tsara nataonao, sarin'ny sakafonao maraina ary fanavaozana ny olona any am-piasana tianao.
fanontaniana tsotra mahatonga anao hieritreritra
Mahafinaritra fa mbola te hifampiresaka sy hizara zavatra ianao, saingy mety ho somary mankaleo.
Raha somary matroka ny resakao tato ho ato dia mety nihemotra kely izy ireo.
Tsy midika izany hoe tsy tian'izy ireo ianao, angamba miandry fotsiny izy ireo mandra-pahatongany zavatra manaitaitra ampy zaraina aminao!
7. Mety hahita olon-kafa izy.
Maharary ity iray ity, saingy mety marina izany.
Raha tsy mifanerasera aminao izy ary tsy manomboka resaka matetika dia mety ho variana amin'ny olona hafa izy.
Raha nanaiky ianao fa tsy maninona ny mahita olon-kafa dia avela hahatsapa ho sosotra ianao, fa tsy afaka milaza azy aminao mihitsy noho izany.
Fako io, fa hanazava ny antony mahatonga azy somary tsy eo aminao ary tsy manao ezaka mihitsy handefasana hafatra aminao aloha.
8. Tsy mitady zavatra matotra izy.
Ny bandy sasany dia tia mitazona ny zavatra tsy mahazatra - midika izany fa tsy mifikitra izy ireo, tsy dia lalina loatra izy ireo, ary tsy dia mandany fotoana na hery be amin'ny 'fifandraisany.'
Raha tsy miezaka mihitsy izy mandefa SMS aminao voalohany, dia mety tsy te hanome anao fiheverana diso izy. Mijanona somary mitoka-monina izy satria tsy tiany hifandray akaiky aminao na hatanjaka be aminao ny zavatra.
Mahasosotra raha izany no izy, saingy manampy anao ihany koa hahalala ny toerana hijoroanao.
Na hifikitra aminy ianao ary hanaiky fa tsy hiraharaha anao amin'ny fomba tianao izy, na mahatsapa fa maniry bebe kokoa ianao ary mahita olon-kafa.
inona no fitondran-tena maharikoriko?
9. Tena sahirana izy!
Inona, ny lehilahy mety ho be atao fotsiny sa tsy afaka mandefa hafatra ?!
Mahatsikaiky ny vazivazy, tena antony lehibe iray tsy anaovany fandefasan-kafatra aminao io aloha.
Efa tena sahirana be ve ianao, nahita lahatsoratra tonga tao an-tsainao, nieritreritra 'Hamaly an'io aho avy eo' ary avy eo adino tanteraka ny hiverina aminy? Tena mitranga izany!
Sorena be izahay mieritreritra ny antony mety tsy hamalian'ny lehilahy iray antsika, fa ny tena miharihary matetika dia tsy raharahiana.
Mahasosotra izany, saingy tsy maninona koa raha tsy ianao no laharam-pahamehana aminy amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ny mampahafantatra azy ny fahatsapanao izany, fa tsy afaka manantena olona iray ianao hamaly ao anatin'ny 2 minitra isaky ny mandeha - na handefa hafatra aloha isaky ny mandeha.
Mety ho sahirana amin'ny zavatra maro hafa izy, na mahatsiaro tena miady saina sy miserana fotsiny.
10. Tsy manome azy fotoana ianao.
Andao lazaina fa nandefa azy ny hafatra farany indrindra tamina resaka ianao. Somary kelikely dia te hiresaka aminy indray ianao fa tsy nandefa hafatra hanombohana ny resaka izy.
Mety hanelingelina izany - saingy mety noho ny hafatra farany nataonao no nanakatona ny zavatra!
Raha tsy omenao azy ny fotoana malalaka hanombohana resaka na hitenenana foana dia mety hahatsapa ho very hevitra izy ary somary nisintaka kely.
Tsy misy te hanelingelina olona sendra olona be atao hoe be atao sy sosotra noho ny lahatsoratra!
Avereno vakiana indray ny hafatrao ary alao antoka fa tsy manidy zavatra tsy mahy ianao na manome vibe izay tsy mahaliana anao ny miresaka aminy!
11. Toa mahazatra azy izany.
Nanana an'ity olana marina ity niaraka tamin'ny taloha aho ary, indray andro, dia sosotra taminy tokoa satria tsapako fa izaho foana no nanao ezaka hiresaka na FaceTime.
Ny valiny? Nieritreritra izy fa tena mandeha tsara io ary samy eo amin'ny pejy iray ihany izahay!
Tamin'ny voalohany, very hevitra be aho - ahoana no hiheverany fa ara-dalàna sy tsara izany ?! Ary tsapako avy eo fa toy izany foana ny teo anelanelantsika!
Tsy dia texter loatra izy, noho izany izaho foana no nandefa hafatra voalohany. Aminy dia toy izany ihany ny fomba fiasa, ny fahazarana tsara ary ny ‘rafitra,’ raha tianao, izay nahafaly anay roa. Fa maninona no heveriny ho olana izany raha tsy nilaza taminy azy mihitsy aho?
Angamba mieritreritra fotsiny ny lehilahyo fa izao no fomba fiasa eo aminao - ianao mandefa hafatra aloha, hoy izy mamaly. Fa maninona izy no hanova zavatra heveriny fa mandeha, indrindra raha mbola tsy nilaza taminy ianao hoe tsy tianao izany?
mifampiraharaha amin'ny olona tahaka anao Don T
Misy mila mandefa hafatra aloha, sa tsy izany?
12. Tsy izany fotsiny no izy aminao - miala tsiny!
Raha mbola tsy hitanao ilay sarimihetsika He Just Not That Into You, dia omenay azy ho entimody! Ilay sarimihetsika dia tena mitondra ny hafatra fa raha misy lehilahy mankao aminao dia hahita fomba hiarahana aminao izy.
Raha tsy mandefa hafatra aminao aloha izy dia mety tsy dia ho sorisory amin'ny fanenjehana zavatra miaraka aminao izy.
Maharary ny lavina, fa mahafinaritra ihany koa ny mahatsapa amin'ny farany fa tsy dia be tabataba aminao izy toa anao momba azy!
Elaela vao tafavoaka, fa mahafinaritra ny mahafantatra ny toerana hijoroanao mba hahafahanao miroso mandroso.
Mety hamaly anao izy noho ny fahalalam-pomba na ny tsy fahalavorariana fotsiny, fa raha lasa hafahafa ianao tsinay tsinay , mila miresaka aminy ianao momba ny fandehan'ny raharaha.
Mety ho iray amin'ireo antony etsy ambony ireo, mazava ho azy - tsy milaza izahay fa voaozona! - fa mety tsy mandefa sms koa aloha izy satria tsy dia miraharaha an'izany izy.
Hahita olona tsy afaka miandry hizara zavatra aminao ianao, izay mandefa SMS indroa miaraka aminao ianao, ary faly mampahafantatra anao ny fitiavany anao, aza manahy.
Tsy azonao antoka ve izay hatao momba an'ity rangahy ity sy ny tsy fahaizany mandefa hafatra aloha? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Raha mandefa hafatra isan'andro aminao izy nefa tsy miantso dia izao no antony
Famantarana mazava 10 Lehilahy iray matotra aminao
Famantarana 18 fa tsy izany aminao izy ary tonga ny fotoana hirosoana
Zavatra 6 tokony hatao raha misy bandy / zazavavy mankafy anao ary miverina avy eo
'Tsy fantany izay tadiaviny' - zavatra 6 mety hidika izany & inona no hatao
Soso-kevitra 7 hananana ny 'Ho aiza ity?' Fifampiresahana amin'ny bandy bandy
ny fomba fanamboarana zavatra rehefa mankaleo
ny fomba hampamoahana ny asanao
manana sipa 2017 ve ny markiplier
tsy hisy hihaino ahy